Nooca alaabta: P2.97
P2.97 Taxanaha Forwin ee Dhacdooyinka Gudaha ee kirada ah Shaashadda Hordhaca iyo Astaamaha: Waxaa lagu kala saaraa naqshadeeda, P2.97 Dhacdada gudaha maqalka qalabka muuqaalka ah ee muuqaalka LED gidaarada fiidiyowga
P3.91 Forwin Taxanaha Dhacdooyinka Gudaha Shaashadda LED Screen
1) Si loo hubiyo nadiifinta garaafyada iyo qoraallada, isticmaal isla heerka nalalka casaanka, cagaarka iyo buluugga oo leh isla nuur (± 10%) iyo dhererka mowjadda (± 2.5nm) ayaa la xushay.
2) xabagta aan codsano si loo koobo dusha sare ee moduleka waxaa laga keenaa Sourth Korea. Waxay hoos u dhigtaa saameynta midabka asalka. Natiijada nuugista buuxda ee iftiinka iftiinka iftiinka LED, muuqaalka ayaa baabi'inaya urmbra iyo cirfiidka inta lagu jiro baahinta.
3) Waxaan adeegsanaa tikniyoolajiyad casri ah oo xirida balaastigga, qaybkasta oo dhererkeedu hooseeyo wax ka yar 0.1mm.Sidaa darteed, bandhigyadeenu waxay leeyihiin isku midab midab wanaagsan, isku mid ahaansho, taas oo ah mid gaar u ah muuqaalka muuqaalka LED-ka.
4) Naqshadeynta Module waxay ka dhigeysaa mid ku habboon isku soo uruurinta iyo sidoo kale in la hubiyo in armaajooyinka ay qurux badan yihiin
5) Dhibaatooyinka nafaqo darrida oo si dhab ah u garta seddex geesood iyo dhibic dhibic la'aan.
6) Qiimuhu waa mid ka dhex tartamaya isla badeecadaha suuqa isla markaana tayada la hubo.
1 Aluminium dhinta-tuurista, miisaanka fudud ee gaadiidka fudud iyo rakibidda saxnaanta sare.
2 Si fiican u la jaan qaado kontoroole kasta oo jira oo aan lahayn shaashad gariir / dhibaatooyin dhalaalaya / cilad / mosaic.
3 Taageerida rakibidda laalaadda / dhulka sii kordhaya, masraxa / bandhigga TV / istudiyaha, iyo codsiyada dhacdooyinka kale.
4 Qalab bilaash iyo kala furfuris.
5 Qalabka loo yaqaan 'Panel Panel' waa: aluminium u dhinta, dulqaad waxaa lagu xakamayn karaa 0.2mm gudahood
6 Kaliya 7.5 KG, aad u fudud
Gudaha HD shaashadda LED kirada
Suuqa fasalka-dhamaadka sare
Kala-sooc la’aan aan kala go ’lahayn iyo faan la’aan
Xidh masaafada u fiirso iyo xagasha ballaadhan ee daawashada
Isku-uruurinta fudud iyo dhaqsaha leh
Eachinled P2.9mm Gudaha HD Kireysiga LED Screen Video Wall wuxuu isku uruurinayaa naqshad cusub iyo nooca 2.97mm pixel pitch gudaha khafiifka ah shaashadda shaashadda, haddana wuxuu aad ugu soo badanayaa suuqa kirada ee dhamaadka sare.
Gudaha P2.97mm kirada LED-ka ee muuqaalka darbiga ah wuxuu soo bandhigayaa 2 dhinac oo hagaajin kara saxnaanta, kala-bixida cidhiidhiga ah ee aan xadka lahayn, sidoo kale waa nooc ka mid ah marinka buuxa ee marinka horudhaca ah ee loo yaqaan 'LED' oo macnaheedu yahay modules hogaaminaya, korontada iyo kaarka aqbalaadda ayaa noqon kara si fudud loogala soo baxo wejiga hore ee muuqaalka gidaarka fiidiyowga P2.97 ee kirada ah.
P2.9mm gudaha HD Soo bandhigida kirada HD waxay noqon kartaa xalka muuqaalka qeexitaanka sare ee gudaha oo ku habboon munaasabad kasta oo gudaha ah. \_
Marxaladda gudaha, istuudiyaha TV-ga, riwaayad, baarkinka mawduuca, Waxqabadka Masraxa, Dhacdooyinka Tooska ah, naadiyada, soo bandhigista, riwaayadaha, xafladaha, hoolalka, daaqadaha dukaamada ama bandhigyada, shirarka, Dib u dhigista marxaladda Freestanding iyo meelo kale oo loogu talagalay xayeysiinta iyo ujeedooyinka madadaalada.
Faahfaahinta taxanaha FORWIN Gudaha ee Kireysiga Gudaha LED
Shayga Taxanaha FORWIN Taxanaha FORWIN
Sawirka Pixe 2.976m 3.91mm
Xirnaanshaha hoggaanka SMD1515 SMD2121
Habka Sawirka 1/21 Sawirka 1/16 Sawir
Hababka dayactirka Front / Rear Serviceable
Cabbirka Module (W * H) 250 * 250mm
Tirada Golaha Wasiirada (W * H * D) 500 * 500 * 75mm
Cusboonaysii Heerka 3840hz-4880hz
Miisaanka Cawl 14-16bits
Miisaanka Golaha Wasiirada 7.8KG / Cadad
Iftiin (Nits / ㎡) 1100nits
Danab shaqeeya 100-240Volt (50-60hz) UL, Shahaadada CE
Maaddaama ay tahay shirkad tiknoolajiyad sare leh oo isku dhafan cilmi-baaris cilmiyeed, qaabeyn, soo-saar, dayactir, iibin iyo is-dhexgal nidaamka, Shenzhen Eachinled Optoelectronics Co.Ltd waxay ku takhasustay shaashadda muujinta LED-ka. Waxaan haynaa koox farsamo tayo sare leh oo R & D ah oo ku hawlan R & D alaabada tiknoolajiyada sare sanado badan oo leh awood farsamo oo adag. Waxaan sidoo kale leenahay injineero khibrad badan leh iyo horumarin wax soo saar xirfadeed iyo injineero naqshadeyn ah. Qalabka wax soo saarka horumarsan iyo qalabka wax lagu tijaabiyo iyo kooxda suuq geynta gaar ahaan kuwa wada shaqeeya kanaalka, waxaan ku maareeynaa ballaarinta suuqa iyo adeegga iibka kadib qaab guud.
1) Tababar amar kadib
Ka dib markii amarka la dhigo, tababar socodsiin ah ayaa la bixin doonaa, oo ay ku jiraan adeegsiga softiweerka, ka shaqeynta amniga, dayactirka qalabka
2) Rakibaadda iyo ka-goynta
Waxaan u diri karnaa xirfadlayaal si ay ugu fuliyaan rakibaadda goobta iyo soo saarista si adag iyadoo la raacayo shuruudaha qorshayaasha iyo buugga asalka ah.
Dammaanad: 3 sano oo damaanad ah, dayactirka nolosha oo dhan
Ku qalabayso qalab dayactir bilaash ah. 2-da sano ee ugu horeysa rarka kadib, waxaan masuul ka noqon doonaa dayactir bilaash ah hadii wax dhibaato ah ay keenaan tayada lafteeda. Intaad qaadeyso qiimaha xamuulka. 2 sano kadib, adeeggu wali waa la heli karaa, laakiin wuxuu ku kacayaa kharashka shaqada, alaabta iyo xamuulka oo keena.
Mabaadi'da dayactirka: jawaab celinta waqtiga, xallinta dhibaatooyinka si dhakhso leh loona hubiyo isticmaalka.
Muddada dayactirka: Waqtiga dayactirka ee muuqaalka muuqaalka, waa lacag la'aan dhammaan kharashka dayactirka
Muddada dayactirka ka dib, kaliya ka qaado kharashka maaddada iyo qiimaha shaqada.